भरतपुर अस्पतालमा ७ महिनामा १ सय १० शिशुको मृत्यु, १ प्रतिशतबाट घट्न सकेन मृत्युदर – Health Post Nepal
भरतपुर अस्पतालमा ७ महिनामा १ सय १० शिशुको मृत्यु, १ प्रतिशतबाट घट्न सकेन मृत्युदर
२०७५ चैत १३ गते ११:०३
मोफसलको सबैभन्दा ठूलो प्रसूति सेवाप्रदायक भरतपुर अस्पतालमा शिशुको मृत्यु हुनेक्रम अझै कम हुन सकेको छैन । अस्पतालमा चालू आर्थिक वर्षमा मात्र १ सय १० जना शिशुको मृत्यु भएको अस्पतालको तथ्यांक छ । यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा अस्पतालमा प्रसूतिसेवा लिन आएका ३ जना आमाको मृत्यु भएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ ।
अस्पतालको तथ्यांकअनुसार ७ हजार ८ सय २७ शिशुको जन्म हुँदा १ सय १० को मृत्यु भएको हो । त्यसमध्ये जन्मेको केही समयमै २१, जन्मेपछि उपचारका क्रममा १२ र गर्भमै ७७ शिशुको मृत्यु भएको अस्पतालका तथ्यांक शाखाप्रमुख नारायणप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनाको अवधिमा अस्पतालमा जन्मेकामध्ये एक प्रतिशत शिशुको मृत्यु भएको रिजालले बताए । गत वर्ष भरतपुर अस्पतालमा १२ हजार ९ सय ८० शिशुले जन्म लिँदा १ सय ६८ को मृत्यु भएको थियो । प्रतिशतका आधारमा गत आर्थिक वर्षमा पनि १ प्रतिशतभन्दा बढी शिशुको मृत्यु भएको देखिन्छ ।
वर्ष ०७३/७४ को तथ्यांक हेर्दा पनि अस्पतालमा १ प्रतिशत शिशुको मृत्यु भएको देखिन्छ । उक्त वर्ष १३ हजार ५ सय २५ शिशुले अस्पतालमा जन्म लिएकोमा १ सय ८९ को मृत्यु भएको थियो । भरतपुर अस्पतालले नवजात शिशुलाई विशेष ध्यान दिन नवजात नर्सको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
‘भरतपुर अस्पतालमा पश्चिममा दाङदेखि पूर्वमा सिरहासम्मका आमाहरू सुत्केरी हुन आउँछन्,’ डा. बसौलाले भने, ‘भरतपुर अस्पताल रेफरल अस्पताल भएकाले पनि यहाँ जटिल केसहरू आउँदा शिशुको मृत्युमा कमी आउन नसकेको हो ।’ अस्पतालले एनआइसियू खाली नभएको अवस्थामा शिशुलाई पुरानो मेडिकल कलेजमा पठाउँदै आएको छ ।
अस्पतालमा १२ शय्याको नवजात शिशु सघन उपचारकक्षसमेत सञ्चालनमा छ । उक्त सघन उपचारकक्षबाट न्यूनतम शुल्क लिएर शिशुको उपचार गरिने अस्पतालले जानकारी दिएको छ । तर, शिशुको मत्युदर भने बढ्दै गएको देखिन्छ । राजधानी काठमाडौंबाहिर सबैभन्दा बढी प्रसुतिसेवा दिने अस्पताल भएकाले शिशुमृत्युदर बढी देखिएको अस्पतालका वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्ट बालरोग विशेषज्ञ डा. युवानिधि बसौलाले बताए । ‘भरतपुर अस्पतालमा पश्चिममा दाङदेखि पूर्वमा सिरहासम्मका आमाहरू सुत्केरी हुन आउँछन्,’ डा. बसौलाले भने, ‘भरतपुर अस्पताल रेफरल अस्पताल भएकाले पनि यहाँ जटिल केसहरू आउँदा शिशुको मृत्युमा कमी आउन नसकेको हो ।’ अस्पतालले एनआइसियू खाली नभएको अवस्थामा शिशुलाई पुरानो मेडिकल कलेजमा पठाउँदै आएको छ ।
नवजात शिशु बाँच्ने र स्वस्थ जीवनको सम्भावना जन्मेको पहिलो घण्टाभित्र दिइने स्याहारमा भरपर्ने डा. बसौलाले बताए । यसमा आमालाई सुत्केरी अवस्थामा दिइने स्याहारको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुने उनी बताउँछन् । भरतपुर अस्पतालको प्रसूतिगृहमा २५ शय्या छन् । तर, अस्पतालबाट दैनिक औसत ४० जनाले प्रसूतिसेवा लिने गरेको अस्पतालले जनाएको छ । भरतपुर अस्पतालले मासिक रूपमा निकाल्ने बुलेटिनका अनुसार अस्पतालमा सरदर दैनिक ३० शिशु प्रसूतिकक्षमा र १० जना अप्रेसनकक्षमा जन्मन्छन् ।
नवजात शिशुलाई राम्रोसँग सुक्खा नपारिदिएमा, टाउको र जिउ नछोपिदिएमा र तापक्रम गुमाउनबाट सुरक्षित नगरिएमा १० देखि २० मिनेटमा शिशुले २ देखि ४ डिग्री सेन्टिगे्रड तापक्रम गुमाउन सक्छ ।
बच्चा जन्मनासाथ जान्नुपर्ने कुराहरू
१. नवजात शिशुलाई जन्मनासाथ आमाको छातीमा सफा, न्यानो र सुक्खा कपडामा राख्ने र त्यही कपडाले पुछिदिने ।
२. नवजात शिशुले सामान्य रूपले श्वास लिइरहेको छ–छैन अवलोकन गर्ने । यदि निस्सासिएको भएमा नाभी काटी नवजात शिशुलाई तत्कालै कृत्रिम श्वास–प्रश्वास दिनुपर्ने हुन सक्छ । यसर्थ, यसबारे विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
३. भिजेको कपडालाई नवजात शिशुबाट हटाउने र न्यानो पारी शिशुलाई आमाको नांगो पेटमा टाँसेर राख्ने र न्यानो, सुक्खा कपडाले छोपिदिने ।
४. नाभी काट्दा निर्मलीकृत औजारको मात्र प्रयोग गर्ने । धागो बाँध्दा नाइटो बाँध्ने चिम्टीले बाँध्ने, रगत निस्किएको छ–छैन हेर्ने र नाभीमा केही पनि नलगाउने । साथै, नाभीलाई खुला छोडिदिने ।
५. आमाले जतिसक्दो चाँडो नवजात शिशुलाई स्तनपान गराउने । शिशु जन्मेको १ घण्टाभित्र स्तनपान गराइसक्नुपर्छ । नवजात शिशुलाई २४ घण्टामा कम्तीमा १० देखि १२ पटकसम्म आमाको दूध चुसाउनुपर्छ ।
६. नवजात शिशुलाई राम्रोसँग सुक्खा नपारिदिएमा, टाउको र जिउ नछोपिदिएमा र तापक्रम गुमाउनबाट सुरक्षित नगरिएमा १० देखि २० मिनेटमा शिशुले २ देखि ४ डिग्री सेन्टिगे्रड तापक्रम गुमाउन सक्छ ।
१, शिशुले चाँडो श्वास फेर्नु (१ मिनेटमा ६० वा सोभन्दा बढी),
२. शिशुले कनेको आवाज सुनिनु,
३. कडाकिसिमले कोखा हान्नु र नाकको पोरा फुल्नु,
४. बच्चालाई ज्वरो आइरहनु,
५. सुस्त अथवा बेहोस हुनु,
६. कम्पन आउनु वा आँखा पल्टाई हात–खुट्टा तिनिक्क पार्नु,
७. जन्मेको २४ घण्टासम्म बच्चाले दिशा–पिसाब नगर्नु,
८. नाइटोबाट रगत वा पिप बग्नु ।